ORCHID CAD EE DHERIGA: NOOCA UBAXA WAA, SIDA NOOCYADA KALA DUWAN EE SAWIRKA, WAXA AY MAGACYADOODU YIHIIN, IYO XEERARKA DARYEESHA GURI GURI - SOOSAARKA DALAGGA
Ubax muuqaal leh oo qurux badan - orchid cad. Daryeelka guriga iyo sawirada dhirta
Orchid White waa dhirta quruxda badan oo dhaadheer ku jirta. Inta badan, ubaxyada waxay qurxiyaan sawirrada shakhsiga ah waxaana loo isticmaalaa inay abuuraan bouquets arooska. Dalka Shiinaha, noocan oo kale ah ubax wuxuu calaamad u yahay sharaf iyo raaxo.
Iyada oo daryeel ku haboon, orchid cad waxay ku farxi doonaan ubax jilicsan. Maqaalka ayaa ka hadli doona sifooyinka ubaxa, dhibaatooyinka iyo daryeelka isaga.
Waa maxay ubaxkan?
Orchid caddaanku waa dufan, marxalad sii kordhaysa, taas oo macnaheedu yahay in ay u isticmaasho dhir kale sida taageerada. May beeralay ilaa saddex jeer sannadkii. Ciriiri ka yimaad nidaam kale oo xidid. Si aan u korin wax badan, orkutada cad waxay hoos u dhacdaa caleemaha hoose, sida muuqaalkani waa dabeecadda noocaas ah.
Warshadu waxay leedahay ubax cad oo leh xarun huruud ah, qaabkana waxay u egtahay midabada. Badanaa, on tufaax waxaa jira waxyaabo yaryar oo casaan, casaan, jaalle ah.
Caleenta qaabaysan oo ballaaran, cagaar mugdi ah. Foornada ubaxa waxay korortaa saldhigga caleenka ugu dambeeyey ee sameeyay. Waxay gaadheysaa ugu badnaan 1 mitir. Noocadani ma hayso pseudobulb, marka loo eego ehelkooda. Xididadu waxay leeyihiin midab khafiif ah.
Magacyada noocyo iyo sawirro
Noocyada soo socda waa orchid cad.
Ubax leh qaab aan caadi ahayn iyo caraf udgoon. Baaxad weyn oo cabbirka, qiyaastii 8 sentimitir dhexdhexaad ah. Samee midab cad oo jilicsan. Angrekum ayaa ku fiday jasiiradda Madagascar. Caleenta wuxuu ku jiraa qaab sir ah, caws ubaxuna waa muddo dheer oo leh 3 ubax oo qaabeeya. Tufaaxyada wax soo saarku waxay u egyihiin caro macaan.
Kuwa ugu caansan ee dhammaan noocyada. Si fiican u habboon xaaladaha guriga.
Markaad iibsatay phalaenopsis, waa inaadan walwalin haddii ay ku noolaan karto, sababtoo ah orchid cad, oo leh taxadar habboon, waxay ku farxi doontaa isha muddo dheer.
Taariikhda orchid caddaan ah ayaa soo jiidatay dhowr tilmaamood: geedka loo baahan yahay si loo gooyo ubaxyada iyo koritaanka dheriga. Orchid waxaa loo tixgeliyaa meesha uu ku dhashay Koonfurta iyo Bariga Aasiya.. Waxay ka timid halkaas in orchid loo soo dhoofiyo laguna doorto xaalado kale oo cimilada ah.
Orchid leh ubax cad ayaa ugu caansan muddadii u dhaxaysay 1930 ilaa 1950. Sababta ugu weyn ee caansanaanta noocan ahi waxay ahayd horumarinta noocyadaas. Waxa uu lahaa ubaxyo waaweyn oo hooska cad, oo dhirta waxay ku faani kartaa fallaadh dheer leh tiro badan oo peduncles ah.
Daryeelka saxda ah ee orchid dheriga waa mid aad muhiim u ah. Marka ubaxu uu dhamaado oo ubaxa qoyan ka baxo, waxay u baahan tahay in la gooyo ka dibna laga saaro.
Bacriminta ayaa yareysa ka dib qaabkan.
Waraabinta waxaa la yareeyaa jiilaalka marmar bishii, haddii loo baahdo, waxaad ku ridi kartaa biyo.
Yellowed iyo caleemaha yaryar - calaamad cad oo ah in meesha aan ku haboon ubax, sidaas dheriga waxaa loo guuray mid cusub. Dib-u-hagaajintu waxay ka caawisaa sidii ay u heli lahaayeen ubax joogto ah.
Marka xigta, fiidiyoow macluumaad ah oo ku saabsan daryeelka orchid:
Dharka ugu sareeya dhirta ayaa ah qayb muhiim ah oo daryeel ah.
In habka ubaxa, waa in la sameeyaa saddexdii toddobaadba mar. Bacriminta ku habboon ee orchids.
Sababtoo ah orchid caddeyn xun oo loola jeedo joogitaanka xad-dhaafka ah ee cusbada macdanta, Bacriminta waxaa lagu dhaqaa biyo iyo todobaadkii todobaadkii ka hor codsiga.
Si aan loo dilin difaaca, laguma talinayo in la sameeyo quudin joogto ah.
Waxaan ku deeqnaa si aan u aragno muuqaal muuqaal ah oo ku saabsan quudinta orchid:
Waa muhiim! Haddii ubax dhawaan la iibsaday, beerka lagama rabo. Waxaa loo baahan doonaa haddii dukaanka, orchid lagu beeray sphagnum.
Nidaamka bedelka waa sidan soo socota.:
Si aad u bilowdo, dhirta waxaa laga saaraa dherigii hore. Tani waxaa si taxadar leh loo sameeyaa si aanay u waxyeeleynin nidaamka xididka.
Marka xigta, xididada waa la nadiifiyaa ciidda. Waxaa habboon in tan la sameeyo tan musqusha ka hooseysa tuubada, biyaha socdey laftooda waxay qaban doonaan shaqada oo dhan mana dhaawici doonaan ubaxa.
Xididdada waxaa lagu baarayaa joogitaanka cudurada iyo cayayaanka.
Haddii la baaray, ka hor intaan la beeriin, waxaa lagama maarmaan ah in la geliyo orchidium biyo yar oo sifeeyaa dhowr saacadood, ka dibna daawee cayayaanka xasharaadka.
Kadibna qalaji iyo caleemo huruud ah, nalalka jilicsan iyo kuwa madhan ayaa laga saaraa. Meelaha meesha la gooyey waa in lagu daaweeyaa jeermis dilaha.
Waxaa suurtagal ah in lagu bedelo ka dib markii xididdadu ay qalalaan, waxayna qaadataa ilaa 8 saacadood.
Waxaan soo bandhigi doonaa si aad u aragto muuqaal muuqaal ah oo ku saabsan qashinka orchid:
Kala saarista dhirta gudaha
Waxay ku dhacdaa siyaabaha soo socda:
Carruurta. Dhirta yaryar ee ka samaysan noocyo orchid. Waxay u muuqdaan meel u dhow ubaxa ugu weyn. Waxaa suurtogal ah in lagu badalo kartida kala duwan marka ilmuhu helo xoog badan.
Dib u dhigid. Lakabadu waxay inta badan ka muuqdaan cylindrical ama caleemo adag. Ka hor inta aan la fadhiyin, waa in la shaqeeyaa, ka dibna rujin. Waxaa lagula talinayaa markii ugu horreysey ka dib markii lagu tallaalay si loogu hayo aqalka dhirta lagu koriyo.
Daaqsi. Habka taranku wuxuu ku habboon yahay dhammaan noocyada orchids. Kala soocida xididdada ayaa la sameeyaa, nalalka ayaa laga tagayaa qayb kasta. Meelaha la jarjaray oo la rusheeyey dhuxul. Dhammaan qaybaha ayaa si gooni gooni ah u degaya weelasha cusub.
Marka xigta, muuqaal faahfaahsan oo ku saabsan dhalashada orchid:
Bakteeriyadu waxay ku jirtaa - waxay muujinaysaa abuurista dhibco caleemaha, iyo sidoo kale huruudkooda iyo muuqaalka boogaha dusha sare ee saxanka caleen.
Macmacaanka macaanka - waxaa lagu aqoonsan karaa ubaxyada cad, oo u eg, burooyinkeeda iyo caleenta. Sababta ugu weyn ee cudurka this waa qoyaan ama heerkulka sare. Si looga takhaluso, waxaa habboon in dib loo eego xaaladaha xabsiga.
Boqoshaada madow - waxay u muuqan kartaa natiijada falalka miisaanka ama qiyaastii. Parasitir qarsoodi ah oo dareere ah oo si fiican u saameeya horumarinta fungus.
Waxaan kuu soo bandhigi karnaa inaad akhrido ficil ku saabsan cudurka iyo cayayaanka ee orchid:
Orchid caddaanku waa dhir aad u fiican, laakiin aad u qurux badan. Waxay ku qurxoon tahay ubaxyo qurux badan. Si aad ubaxdo ubax guriga, waa inaad isku daydaa, laakiin waxa ugu muhiimsan waa in la raaco tilmaamaha iyo talooyinka loogu talagalay daryeelka.